ခွခှေငျတယျဆိုတာ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေးလေးက ခွခှေငျခှငျလေးနဲ့လို့ အရပျထဲ မကွာမကွာ ကွားဖူးကွမှာပေါ့။ ကလေးသေးသေးလေးတှမှော ဒူးလေးတှေ၊ ခွထေောကျလေးတှေ ခှငျနပွေီး ပုံပနျးမကြ ဖွဈနတေတျကွပါတယျ။ ခွခှေငျတယျဆိုရာမှာလညျး အတှငျးခှငျနဲ့ အပွငျခှငျဆိုပွီးတော့ ၂ မြိုး ၂ စား ရှိတာပေါ့။
● ခွထေောကျကို တငျးတငျးစရေ့ပျလိုကျလို့ ခွထေောကျကွီးက ကားထှကျနပွေီး ဒူးနှဈဖကျ ကှာဝေးနတေယျဆိုရငျ အပွငျခှငျလို့ ချေါနိုငျပါတယျ။ ကလေး စပွီးမတျတပျရပျ၊ လမျးလြှောကျတတျခါစအရှယျ အသကျ ၁၂ လနဲ့ ၁၈ လလောကျမှာ စပွီးတှရေ့တတျပါတယျ။ မတျတပျရပျပေး၊ လမျးလြှောကျပေးရငျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ခွထေောကျက ပွနျတညျ့လာမှာပါ။
● အတှငျးခှငျဆိုတာကတြော့ ဒူးနှဈလုံးကို တငျးတငျးစေ့ ရပျလိုကျမယျဆိုရငျ ခွထေောကျက အပွငျကို ခှငျထှကျပွီးတော့ ခွခေငျြးဝတျနှဈဖကျက အဝေးကွီး ဝေးနတေတျတာပေါ့။ ကလေး အသကျ ၃ လနဲ့ ၆ လကွားလောကျမှာ စတငျတှရေ့တတျပါတယျ။
>> ဘာကွောငျ့ ဒီလိုခွထေောကျခှငျနတေတျကွတာလဲ?
ကလေးလေးတှရေဲ့ခွထေောကျဟာ မမှေးခငျ အမဝေ့မျးထဲမှာတုနျးက ကှေးကှေးလေးနခေဲ့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မှေးပွီးအစောပိုငျးကာလမှာ ခွထေောကျ အပွငျခှငျတာပေါ့။ တဈခါတလေ ရှားရှားပါးပါး အာဟာရပွဿနာတှေ၊ ကွီးထှားမှုပွဿနာတှေ၊ တဈခွားရောဂါတှကွေောငျ့ ဆိုးဆိုးရှားရှား ခှငျနတေတျတာမြိုးလညျး ရှိတတျပါတယျ။
တဈခါတလကေတြော့ အစောပိုငျးမှာ အပွငျခှငျနတေဲ့ ကလေးတဈယောကျဟာ ကွီးလာတာနဲ့အမြှ အပွငျခှငျနတော တဖွညျးဖွညျး သကျသာလာပွီး အတှငျးခှငျသှားတတျတာမြိုး ရှိပါတယျ။ အတှငျးခှငျတာ အမြားစုက ဒီလိုဖွဈလာတာပါ။ အသကျ ၃ နှဈနဲ့ ၅ နှဈကွားမှာ အဖွဈမြားပါတယျ။
>> ခွထေောကျခှငျတဲ့ကလေးတှကေို ဘယျလိုကုသကွမလဲ?
ကလေးအမြားစုကတော့ ဘာကုသမှုမှ မလိုအပျပါဘူး။ ခွထေောကျအပွငျခှငျတာ အမြားစုကတော့ အသကျ ၂ နှဈလောကျမှာ ပြောကျသှားတတျပါတယျ။ ခွထေောကျ အတှငျးခှငျတာမြိုးကတြော့ ကလေး တဖွညျးဖွညျး ကွီးလာပွီး အသကျ ၅ နှဈ၊ ၆ နှဈလောကျရောကျရငျ သကျသာသှားလရှေိ့ပါတယျ။ အသကျ ၇ နှဈကနေ ၁၀ နှဈလောကျ ရောကျတဲ့အခါမှာတော့ ခွထေောကျက ပုံမှနျလောကျကို ဖွဈသှားပါပွီ။ ဆယျကြျောသကျ အစောပိုငျးကာလလောကျရောကျရငျ ဒူးရော၊ ခွခေငျြးဝတျရော ထိကပျပွီး ကောငျးကောငျး မတျတပျရပျနိုငျပွီပေါ့။
အရမျးဆိုးတဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာတော့ အရိုးအထူးကုဆရာဝနျနဲ့ ပွသဖို့လိုနိုငျပါတယျ။ တဈခါတလေ ခွထေောကျပွနျလညျတညျ့မတျသှားအောငျ ခွထေောကျသိုငျးကွိုးတပျတာမြိုး အထူးထုတျလုပျထားတဲ့ ဖိနပျစီးတာမြိုး ပွုလုပျပေးဖို့လိုအပျပါတယျ။
ကလေးလေးက ခြေခွင်ခွင်လေးနဲ့လို့ အရပ်ထဲ မကြာမကြာ ကြားဖူးကြမှာပေါ့။ ကလေးသေးသေးလေးတွေမှာ ဒူးလေးတွေ၊ ခြေထောက်လေးတွေ ခွင်နေပြီး ပုံပန်းမကျ ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ခြေခွင်တယ်ဆိုရာမှာလည်း အတွင်းခွင်နဲ့ အပြင်ခွင်ဆိုပြီးတော့ ၂ မျိုး ၂ စား ရှိတာပေါ့။
● ခြေထောက်ကို တင်းတင်းစေ့ရပ်လိုက်လို့ ခြေထောက်ကြီးက ကားထွက်နေပြီး ဒူးနှစ်ဖက် ကွာဝေးနေတယ်ဆိုရင် အပြင်ခွင်လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေး စပြီးမတ်တပ်ရပ်၊ လမ်းလျှောက်တတ်ခါစအရွယ် အသက် ၁၂ လနဲ့ ၁၈ လလောက်မှာ စပြီးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်ပေး၊ လမ်းလျှောက်ပေးရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခြေထောက်က ပြန်တည့်လာမှာပါ။
● အတွင်းခွင်ဆိုတာကျတော့ ဒူးနှစ်လုံးကို တင်းတင်းစေ့ ရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ခြေထောက်က အပြင်ကို ခွင်ထွက်ပြီးတော့ ခြေချင်းဝတ်နှစ်ဖက်က အဝေးကြီး ဝေးနေတတ်တာပေါ့။ ကလေး အသက် ၃ လနဲ့ ၆ လကြားလောက်မှာ စတင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
>> ဘာကြောင့် ဒီလိုခြေထောက်ခွင်နေတတ်ကြတာလဲ?
ကလေးလေးတွေရဲ့ခြေထောက်ဟာ မမွေးခင် အမေ့ဝမ်းထဲမှာတုန်းက ကွေးကွေးလေးနေခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မွေးပြီးအစောပိုင်းကာလမှာ ခြေထောက် အပြင်ခွင်တာပေါ့။ တစ်ခါတလေ ရှားရှားပါးပါး အာဟာရပြဿနာတွေ၊ ကြီးထွားမှုပြဿနာတွေ၊ တစ်ခြားရောဂါတွေကြောင့် ဆိုးဆိုးရွားရွား ခွင်နေတတ်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေကျတော့ အစောပိုင်းမှာ အပြင်ခွင်နေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အပြင်ခွင်နေတာ တဖြည်းဖြည်း သက်သာလာပြီး အတွင်းခွင်သွားတတ်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ အတွင်းခွင်တာ အများစုက ဒီလိုဖြစ်လာတာပါ။ အသက် ၃ နှစ်နဲ့ ၅ နှစ်ကြားမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
>> ခြေထောက်ခွင်တဲ့ကလေးတွေကို ဘယ်လိုကုသကြမလဲ?
ကလေးအများစုကတော့ ဘာကုသမှုမှ မလိုအပ်ပါဘူး။ ခြေထောက်အပြင်ခွင်တာ အများစုကတော့ အသက် ၂ နှစ်လောက်မှာ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက် အတွင်းခွင်တာမျိုးကျတော့ ကလေး တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာပြီး အသက် ၅ နှစ်၊ ၆ နှစ်လောက်ရောက်ရင် သက်သာသွားလေ့ရှိပါတယ်။ အသက် ၇ နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်လောက် ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ခြေထောက်က ပုံမှန်လောက်ကို ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဆယ်ကျော်သက် အစောပိုင်းကာလလောက်ရောက်ရင် ဒူးရော၊ ခြေချင်းဝတ်ရော ထိကပ်ပြီး ကောင်းကောင်း မတ်တပ်ရပ်နိုင်ပြီပေါ့။
အရမ်းဆိုးတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာတော့ အရိုးအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့လိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ခြေထောက်ပြန်လည်တည့်မတ်သွားအောင် ခြေထောက်သိုင်းကြိုးတပ်တာမျိုး အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်စီးတာမျိုး ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။